11 အမျိုးသမီးအဖွဲ့သူတို့၏ကလေးများ Killing များအတွက် Death Row အပေါ် Are
လူမြိုးအမြဲကဲ့သို့သောရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပွားမှုကြောင့်တုန်လှုပ်နေသည် Andrea Yates , Method ထို့နောက်အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာကအစီရင်ခံရန်ရဲကိုခေါ်မယ့်ရေချိုးကန်ထဲမှာသူမ၏ကလေးများရေနစ်သူကိုငါးမိခင်တစ်ဦး, ဒါပေမယ့်သူတို့ကလေးတွေကိုသတ်ပစ်တဲ့သူမိခင်များကျွန်တော်ထင်စေခြင်းငှါ, ထက်ပိုပြီးအဖြစ်များရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် Anthropological အစည်းအရုံးရဲ့အဆိုအရ 200 ကျော်အမျိုးသမီးတွေနှစ်စဉ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌မိမိတို့၏ကလေးများကိုသတ်။ သုံးမှငါးကလေးတွေတစ်နေ့သူတို့ရဲ့မိဘအသတ်ခံနေကြသည်။
လူသတ်မှု, အသက်လေးအောကျသားသမီးများ၏သေမင်း၏ဦးဆောင်အကြောင်းတရားများတစ်ခုဖြစ်တယ် "သို့သျောလညျးကြှနျုပျတို့သညျဤရှားပါးအပြုအမူကြောင်းလက်တွေ့အမြင်ဖြင့်ဇွဲရှိရှိဆက်လက်လုပ်ဆောင်," ဘယ်သူသည်မိခင်များနှင့် ပတ်သက်. အရှည်မှာလေ့လာခဲ့ခဲ့သူကို Jill Korbin, ကလေးအလွဲသုံးစားမှုတခုတခုအပေါ်မှာကျွမ်းကျင်သူကဆိုသည် သူတို့သားသမီးသတ်ကြ၏။
"ကျနော်တို့ကသဘာဝအဖြစ်တစ်လောကလုံးမိခင်များ၏စိတ်ကူးကနေ detach နှင့်လူမှုရေးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်မြင်သင့်ပါတယ်" ဟုနန်စီ Scheper-Hughes, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာမနုဿဗေဒပညာရှင်ကပြောပါတယ်။ "မိခင်ညာဘက်ထွက် လာ. , ဆိုတတ်လျှင်ပင်တစ်စုပေါင်းငြင်းပယ်ရှိပါတယ် '' ငါတကယ်ငါ့အလေးတွေနှင့်အတူယုံကြည်စိတ်ချရမရသင့်တယ်။ " '
မိခင်များသူတို့သားသမီးဦးသေဆုံးသောအခါမကြာခဏအခန်းကဏ္ဍသောသုံးခုကိုအဓိကအချက်များဖြစ်ကြောင်း - ကိုရွှေ့ဆိုင်စိတ္တ, ထိုကဲ့သို့သောငြူစူသောစိတ်နှင့်စွန့်ခွာခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုအဖြစ်အချက်များအားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင် psychotic အံဝင်ခွင်ကျ။
အဖြစ်များသည့်ရောဂါလက္ခဏာ include- စိတ်ကျရောဂါ, မျှော်လင့်ချက်မဲ့၏ခံစားချက်များကို, စိုးရိမ်စိတ်, ကြောက်ရွံ့သောသဘောသည်အပြစ်ရှိတယ်သစ်ကိုကလေးနှင့်အတူဘွန်းဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း, တန်ဖိုးမရှိတဲ့ခံစားမှု။ တည်းကကုသမှုမရှိဘူးကျန်ရစ်ပါကရွှေ့ဆိုင်စိတ္တဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပေးနိုင်သည်။
မှုဟာသိပ်စိတ္တပိုပြီးပြင်းထန်ခြင်းနှင့်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ရောဂါလက္ခဏာများအသံသတ်သေကျူးလွန်ဖို့ဒါမှမဟုတ် mutilate နှင့် / သို့မဟုတ်သူမ၏ကလေး / ကလေးများသတ်မှမိခင်ကိုသွန်သင်ဘယ်မှာအစွန်းရောက်အိပ်မပျော်, obsessive အပြုအမူများနှင့်အာရုံစိတ်အာရုံချောက်ခြားခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
အချို့ကိစ္စများတွင်ကလေးများကလေးများ၏ဖခင်အိမ်တွင်ကျန်ရစ်သည့်ကိစ္စများတွင်စွန့်ခွာခြင်းနှင့်ငြူစူသောစိတ်တစ်ခုပြင်းထန်သောခံစားမှုအားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင်တစ် psychotic ပျက်ပြားကြုံနေရမိခင်၏ရလဒ်အဖြစ်အသတ်ခံနေကြသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်လက်စားချေရှာလိုအပ်ကြောင်းအကြောင်းပြချက်ရှုံးရလိမ့်မည်။
သေခြင်းတရားအတန်းအပေါ်လက်ရှိနေသောမိန်းမ, ထိုအရပ်၌သူတို့ကိုထားသောပြစ်မှုများများ၏အခန်းကဏ္ဍမှာတစ်ဦးကကြည့်, သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုသတ်သောမိန်းမတို့ကိုအမှန်ပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ချင်ပါတယ်ကဲ့သို့ရှားပါးမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုပြသထားတယ်။
ပက်ထရီရှာ Blackmon သူမကမေလ 1999 ခုနှစ်တွင်ဒေါသန်, AL အတွက်သူမ၏2နှစ်အရွယ်မွေးစားသမီးဦးသေဆုံးတဲ့အခါမှာ 29 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
Kenisha Berry ဟာ အသက် 20 မှာ, သူ့သေခြင်း၌ရရှိလာတဲ့ပြွန်တိပ်နှင့်အတူသူမ၏4နှစ်အရွယ်သားဖုံးလွှမ်းကြ၏။
သူမက 1989 ခုနှစ်အရီဇိုးနားအတွက်သူမ၏4နှစ်အရွယ်သားဦးသေဆုံးခဲ့သည့်အခါ Debra ဂျင်းနို့ 25 ခဲ့သည်။
သူမက 1994 ခုနှစ်စန်း Jacinto, California မှာ 34 နှစ်အရွယ်မှာဒိုလုဇမြို့တည်းဟူသော Durenrostro သူမ၏သမီးနှစ်ယောက်, အသက်4နှင့် 9, နှင့်သူ၏သားကိုအသက် 8 ဦးသေဆုံးခဲ့သည်။
သူမကို 1999 ခုနှစ်တွင် Santa Rosa ချိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိသူမ၏သားသုံးယောက်, အသက်အရွယ် 5, 8 နှင့် 11 သေဆုံးသည့်အခါ Caro Socorro 42 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
Susan Eubanks သူမက 33 တုန်းက 1996 ခုနှစ်, စန်းမားကို့စ, ကယ်လီဖိုးနီးယား, သူမ၏သားလေးယောက်, အသက်အရွယ်မရွေး 4, 6,7နဲ့ 14 အသတ်ခံရ။
ကယ်ရိုလိုင်း Young က သူမရဲ့4နှစ်အရွယ်မြေးမလေးနဲ့6နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူဦးသေဆုံးသည့်အခါ Haywood, California မှာ 49 ခဲ့သည်။
ရော်ဘင် Lee က Row သူမက 1992 ခုနှစ်တွင်သူမ၏ခင်ပွန်းသူမ၏ 10 နှစ်အရွယ်သားနှင့် Boise, အိုင်ဒါဟိုရှိသူမ၏ 8 နှစ်အရွယ်သမီးဦးသေဆုံးတဲ့အခါမှာ 35 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
သူမကသူမ၏7နှစ်အရွယ်သမီးဦးသေဆုံးသည့်အခါ Michelle ဆူး Tharp Burgettstown, Pennsylvania ပြည်နယ်ထဲမှာ 29 နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။
သူမကသူမ၏ခင်ပွန်း,7နှစ်အရွယ်သားနဲ့ဟူစတန်, တက္ကဆက်ပြည်နယ်2နှစ်အရွယ်သမီးအသတ်ခံရသည့်အခါ Frances Elaine နယူတန် 21 ခဲ့သည်။ Update ကို: Frances Elaine နယူတန်စက်တင်ဘာလ 14, 2005 ရက်တွင်ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။
Darlie လင်း Routier သူမရဲ့5နှစ်အရွယ်သားသတ်ဖြတ်၏ပြစ်မှုထင်ရှားအခါ Rowlett တက္ကဆက်ပြည်နယ် 26 ခဲ့သည်။
သူမ 33 နှစ်အရွယ်မှာထရီဇာ Michelle Lewis ကကီးလင်, Virgina အတွက်သူမ၏ 51 နှစ်အရွယ်ခင်ပွန်းနှင့် 26 နှစ်အရွယ် stepson သတ်ကြ၏။
"မတိုင်မီကတစ်ဦးလူသတ်မှုရန်, စာရေးကလူ, ဤလူတို့သညျနှငျ့အမြိုးသမီးအခက်အခဲပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းရှိခြင်းနေကြသည်ကိုသိနေ၏။ အဆိုပါအများပိုင်ပိုကောင်း်ရောက်စွက်ဖက်ဖို့ဘယ်လိုနှင့်ကလေးအလွဲသုံးစားမှုကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုထောကျပံ့ဖို့ဘယ်လိုအသိအမှတ်ပြုအတွက်ပညာတတ်ခံရဖို့ရှိပါတယ်" ဟုသူကဆိုသည်။
Bridgett Frisbie ၏လူသတ်မှု: ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာ
ရာဇဝတ်မှုများနှင့်ရှိထားနှင့် Erik Menendez ၏စမ်းသပ်မှု
အီတလီကြိယာ conjugation: 'Morire' (Die မှ)
မည်သို့တစ်ဦးက Black Hole မျိုကြယ်ကိုသိလိုပါသလား? တစ် Computer ကိုမေးပါ!
အဆိုပါ Gamma ရာထူးအမည်နှင့်အတူတွက်ချက်မှု
ပထမကမ္ဘာစစ်: Sopwith ကုလားအုတ်
အဆိုပါလေးဆယ်ငါးယောက်: Culloden ၏တိုက်ပွဲ
တစ်ဦး '' Cleek '' ဂေါက်ကလပ်ကဘာလဲခဲ့သလား
ထိပ်တန်း 10 Blink-182 သီချင်းများ
တစ်ဦး Broken လှုပ်ရှားဘား Link ကိုအစားထိုးရန်အတွက်မည်သို့
စပိန်ကြိယာ '' Volver '' အသုံးပြုခြင်း
တပ်ဦးအဆုံးပျက်စီးခြင်း: ဒါဟာကိုယ်သင် Fix?